I-Fuzzy Logic Robotic - AmaGeofumadas
Ephreli, 2021 Ubunginiyela, Innovations, eziningana
Kusuka ekwakhiweni kwe-CAD ukulawula nge-software eyodwa
I-Fuzzy Logic Robotics umemezela ukwethulwa kwenguqulo yokuqala ye- Isitudiyo esingajwayelekile™ embukisweni weHannover Messe Industry 2021 ozokhomba ushintsho ekukhiqizeni i-robotic eguquguqukayo.
➔ Ngokuhudula bese uphonsa izingxenye ze-CAD kwiwele lakho le-3D ledijithali, izindlela zokwenza izinto eziyinkimbinkimbi zenziwa ngokuzenzekelayo futhi zithunyelwe kurobhothi lokukhiqiza ngokuchofoza okukodwa. Konke ngeplatifomu yesoftware yendawo yonke.
➔ Kususelwa ekulingiseni okungaxhunyiwe ku-inthanethi ukulawula isikhathi sangempela, isoftware Isitudiyo esingajwayelekile™ isusa igebe phakathi kokulingisa neqiniso ukunciphisa isikhathi sokuphumula nokwenza ngcono ukuhamba komsebenzi we-robotics.
➔ Yenziwe ngobunjiniyela kusukela phansi kuze kwehliswe kakhulu isidingo sobuchwepheshe bamarobhothi sibonga ubuchwepheshe bamawele bedijithali besikhathi sangempela esingena khodi.
Can Ungashintsha phakathi kwanoma yikuphi ukwenziwa kwamarobhothi nemodeli ngokuchofoza kabili ukuthola inketho efanele yohlelo lwakho lokusebenza, ngaphandle kwesidingo sokushintsha isoftware noma ukuphinda imisebenzi yokuthatha edla isikhathi.
Controls Ilawula ngisho nezicelo eziyinkimbinkimbi kakhulu zerobhothi futhi iyatholakala ezinkampanini zabo bonke osayizi.
Ubunzima kuze kube manje
Womabili amarobhothi asezimbonini nasekubambisaneni abiza kakhulu ukufeza ukukhiqizwa okuguquguqukayo ngokweqiniso ngenxa yobunzima besoftware nokuhlanganiswa. Okwamanje zimbalwa kuphela izicelo zokuphatha, njengokukhetha nendawo, ezifinyeleleka ngokweqiniso kwabangewona ochwepheshe ngakho-ke zibiza kakhulu ukukhiqiza okuguquguqukayo.
Kodwa-ke, iningi lamarobhothi nezicelo ze-cobotic zidinga amathuluzi wesoftware ayinkimbinkimbi futhi ahlukahlukene, kanye nochwepheshe bezimpawu. Lawa mathuluzi adinga ukuqeqeshwa okubalulekile nolwazi.
Umphumela uba ukuthi ngaphezu kwe-75% yezindleko eziphelele zobunikazi (i-TCO) zamarobhothi zihlobene nokuqeqeshwa kanye nezinsizakalo zesoftware zokukhiqiza ngobuningi okujwayelekile. Ekukhiqizeni okuguquguqukayo le nombolo ingakhuphuka ngaphezu kwe-90% TCO futhi ngaleyo ndlela ichithe inzuzo engenzeka ekutshalweni kwemali ohlelweni lwe-robotic.
Isixazululo: ipulatifomu enembile yazo zonke izinyathelo
Isitudiyo esingajwayelekile™ iyinhlangano yesikhulumi sesoftware esezingeni elifanele esika izindleko zamarobhothi ngeshumi. Nge-Fuzzy Studio ™ noma iyiphi ifektri ingaba nge-robhothi ngokuzenzakalela, kalula futhi ibize kahle, noma ngabe kwenziwa ngokucubungula okuyinkimbinkimbi, ukuhambisa nokufaka izinsimbi.
➔ enembile futhi elula njengomdlalo wevidiyo
➔ Isixhumi esibonakalayo esijwayelekile sayo yonke imikhiqizo yamarobhothi
Prec Ukunemba kwebanga lezimboni nokusebenza kwe-real-time control robot
I-Fuzzy Studio ™ ihlanganisa zonke izigaba empilweni yamangqamuzana amarobhothi, kusukela ekulungisweni kwephrojekthi, ukuklanywa nokuthunyelwa ekulawuleni ukukhiqizwa kwesikhathi sangempela, ukuhlelwa kabusha kwe-inthanethi nokunakekelwa.
Idizayinelwe ukusheshisa ukwamukelwa nokusetshenziswa kwamarobhothi yibo bonke ababambiqhaza, kusuka kubakhiqizi abakhulu kuye kumabhizinisi amancane naphakathi, abahlanganisi bohlelo kanye nabakhiqizi bamarobhothi be-OEM.
Khetha amarobhothi kulabhulali ebanzi
Dlulisa amehlo kuqoqo eliphelele lamamodeli wamarobhothi kusuka kumikhiqizo esekelwayo nesihlungi ngezici.
Ngenisa amafayela we-CAD ne-3D kalula
Dala ngokushesha uhlelo lwe-robotic olunokwethembeka okuphezulu okusebenzisana kwe-3D nezinto ze-CAD. Amafomethi asekelwayo: amafomethi angaphezu kwama-40 afaka i-CAD STEP yezimboni kanye ne-IGES.
Thola Ithuluzi Lokugcina Lengalo Lakwesokudla
Khetha kokukhethwa kukho kwamathuluzi wokukhiqiza amaningi noma ukungenisa amathuluzi wangokwezifiso. Wonke amathuluzi asekelwayo ayi-plug futhi adlala ahambisanayo.
Dala futhi ushintshe izindlela zamathuluzi ngokubukeka
Ayikho imigqa edidayo yekhodi noma yokuxhumanisa izinhlelo. Yakha ngokubonakalayo izindlela zamathuluzi. Shintsha ama-trajectories ngesikhathi sangempela futhi ubone izinguquko ku-3D.
Ukukhiqizwa okuzenzakalelayo kwe-trajectory ngokuhudula bese uphonsa
Hudula bese uphonsa izinto ze-3D CAD kudizayini nama-algorithms okuphathelene nawo azokhiqiza ngokuzenzakalela izindlela zamathuluzi ezigwema ukushayisana, ukonga isikhathi, ukwandisa ukusebenza nokwenza ngcono ukuphepha. Amahora wokuhweba womsebenzi oqaphile ngokuchofoza okulula okumbalwa.
Dala inqubo ephelele ngaphandle kwekhodi
Hlela izindlela zamathuluzi, amathuluzi, izinzwa futhi uvumelanise i-I / O. Akunasidingo sokubhala ikhodi.
Shintsha amarobhothi bese uqhubeka usebenza
Ngenxa yobuchule obuphathelene nokuphathelene, abasebenzisi bangashintsha phakathi kwamarobhothi ngokuchofoza kabili kudizayini ukuthola okulungele umsebenzi wabo. Wonke ama-trajectories nezinqubo zibalwa ngokuzenzakalela futhi ukungalingani kungalungiswa kalula.
Ngenxa yokulawulwa kokucaciswa kwama-algorithms ngesikhathi sangempela, "okubonayo ekulingiseni yilokho okutholayo empeleni." Isicelo esiphelele singafakwa ngokuchofoza okukodwa kurobhothi lokukhiqiza futhi sivale igebe phakathi kokulingisa neqiniso. Izinqubo zilandelwa futhi zilungiswe ngqo nangesikhathi sangempela.
Mayelana ne-Fuzzy Logic Robotics
I-Fuzzy Logic Robotics Ivele ezikhungweni zocwaningo zamarobhothi ezihola phambili eFrance futhi yasungulwa yithimba lochwepheshe bamarobhothi baseFrance naseMelika ababona indlela entsha yokulawula nokuhlela isizukulwane esilandelayo sezicelo zamarobhothi. Ngenxa yeklayenti elidala embonini yokubukwayo, abasunguli bakhe isixazululo esisha ngokuphelele ukuze abasebenzisi abangenalwazi bakwazi ukusebenzisana, balawule futhi bahlele amarobhothi ezimboni ezicelo eziyinkimbinkimbi ezenziwa yinoma iliphi irobhothi. Isipiliyoni sabo sabavumela ukuthi badlulisele lokhu kusungulwa embonini.
Kusuka kwaGeofumadas siyajabula ukukulethela zonke izindaba ezihlobene nezwe le-geo. Kulokhu, i-Fuzzy Logic Robotic yethula isisombululo esizosiza izinqubo zokuphathwa kwedatha kwe-CAD ekulawulweni kwesikhathi sangempela kwamarobhothi. Lokhu ngokungangabazeki kusisondeza kulokho esikufunayo kunguquko yesine yezimboni, lapho izinqubo zizenzekelayo futhi izinsiza ezidingekayo zenzelwe ukuphatha isikhathi esingcono. Inhloso kaFuzzy Studio ukwenza uguquko olulandelayo ku-automation yamarobhothi ngokuxazulula izinselelo nokuguqula indlela abantu abaxhumana ngayo futhi basebenzise amarobhothi. Sikumema ukuba uvakashele iwebhusayithi ye-Fuzzy Logic Robotics ukuthola eminye imininingwane xhumana nabo ku ryan@flr.io anthony.owen@flr.io. Sizokwazi ngokuvela kwalesi sixazululo ukukunikeza yonke imininingwane kuqala.
Thumela Previous«Langaphambilini IMARA.EARTH ukuqala okulinganisa umthelela wezemvelo
Post Next I-ESRI Venezuela eno-Edgar Díaz Villarroel weTwingeo 6th EditionOkulandelayo »